‘च्यारिटी शो हेरेका दर्शकको प्रतिक्रियाबाट उत्साहीत छु’ – निर्देशक जनक दिप पराजुली - Glamour Nepal
जनकदीप पराजुली सञ्चार र पत्रकारिता क्षेत्रमा चिनिएको नाम हो । उनले ५० भन्दा धेरै म्युजिक भिडियोको निर्देशन गरेका छन् । भारतमा केही समयको सिनेमा अध्ययनपछि नेपाल फर्किएका पराजुलीले एउटा सिनेमा तयार पारेका छन्, ‘प्रोड्युसर’ । आउँदो माघ १७ गतेबाट देशभर प्रदर्शन हुने यो सिनेमाप्रति समग्र सिने उद्योगले नै आशा राखेको छ । पराजुली पनि आफ्नो पहिलो सिनेमा सफल हुने र दर्शकले मन पराउनेमा आशावादी देखिएका छन् । प्रदर्शनको मिति नजिकिदै गर्दा निर्माण पक्षले एग्रेसिभ प्रमोशन गरिरहेको छ । सोही क्रममा ग्ल्यामर नेपालले निर्देशक पराजुलीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश:
‘प्रोड्युसर’कस्तो कथा बोकेको सिनेमा हो ?
– यो सिनेमाको कथा फिल्म उद्योगकै हो । सिनेमा खेल्ने, बनाउने, इन्भल्ब हुन हुन चाहने तीन युवाको संघर्षको कथा फिल्मले भनेको छ । तर प्रस्तुती चाही नयाँ पुस्ताले रुचाउने खालको कमेडी ढंगबाट गरिएको छ । त्यो सँगसँगै आफ्नो देशलाई माया गर्नुपर्छ, जोगाउनुपर्छ भन्ने सदेन्श पनि फिल्ममा छ।
पछिल्लो आश राखिएका नयाँ निर्देशकहरुको फिल्म पनि राम्रो व्यापार गर्न सकिरहेका छैनन् । कतिको च्यालेन्ज महसुस गरिरहनु भएको छ ?
– सबैलाई एउटै क्याटोगोरीमा राखेर हेर्नुहुँदैन् । फेरि अरु साथीहरुले कसरी निर्देशन गर्नुभयो, मलाई थाहा छैन । तर मलाई यही चलचित्रले रातारात हिट बनाउनुपर्ने, वरिष्ठ बनाउनु पर्ने वा समिक्षकको वाहावाही पाउनुपर्ने भन्ने छैन । मलाई यति मात्र छ कि सिनेमाले लगानी उठाउनु मनपर्‍यो र दर्शकले फिल्म हेरुन्जेल मनोरञ्जन पाउनुपर्‍यो । यति भए पुग्छ । यी दुई कुरामा म सफल हुन्छु जस्तो छ । अरु साथीहरुले धेरै जसो एक्स्पेरिमेन्ट गर्नुभएको छ । केही नयाँपन र शैली दिन खोज्दा असफल हुनुपरेको छ । दर्शकहरुले भने नाटकघरमा नाटक हेर्दा र हलमा फिल्म हेर्दा भिन्न स्वादको अपेक्षा राख्नुहुन्छ । मेरो चलचित्रमा मैले एउटा दर्शकले राख्ने अपेक्षा पुरा गर्ने प्रयास गरेको छु । त्यसैले असफल हुन्छु कि भन्ने चिन्ता छैन।
फिल्म रिलिजमा किन ढिलाई ?
– हो, फिल्मको काम लगभग एक वर्ष अगाडि नै सकिएको हो । तर हामी उचित समयको पर्खाईमा थियौं । त्यससँगै हाम्रो यो चलचित्रमा निर्माता संघका अध्यक्ष राजकुमार राईको लगानी भएकोले अरु फिल्मलाई चलाउने मौका दिँदादिँदै आफ्नै फिल्मचाहीं केही ढिलाई भयो तर पनि केही बिग्रिएको छैन । फिल्मको कन्टेन्ट र प्रस्तुती पुरानो हुने खालको छैन । बरु हामीले यो समयको भरपुर सदुपयोग गरेका छौं । मार्केटिङदेखि च्यारिटी शोसम्म गर्न भ्यायौं । मार्केटिङले फिल्मका बारेमा धेरै भन्दा धेरै दर्शकलाई जानकारी दिन सक्यौं । जसबाट उहाँहरु फिल्म हेर्न हलसम्मै आउने वातावरण बनेको छ भने च्यारिटीले हाम्रो फिल्मको स्ट्रङ पोइन्ट पत्ता लागेको छ।
च्यारिटी शोहरुबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भयो ?
– हो, च्यारिटी शोहरुले नै हाम्रो हौसला बढाएको हो । करिब आधा दर्जन शोहरु भयो, सबै ठाउँमा दर्शकहरुले अत्याधिक मन पराइदिनुभएको छ । च्यारिटी शोको टिकटको मुल्य नियमित मुल्यभन्दा धेरै हुने भएपनि दर्शकहरुको हलमा भिड लागेको थियो । फिल्म हेरिसकेपछि सबैको आँखामा सन्तुष्टी भरिएको थियो र उहाँहरुले फिल्म युनिटलाई धन्यवादसँगै शुभकामना दिनुभयो । यसकारण पनि हामी सफल हुनेमा ढुक्क छौं।
तपाईं आफैं पनि समिक्षक हुनुहुन्छ । तपाईलाई फिल्म दर्शकले मन पराइदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि समिक्षकले ?
– मैले अघि पनि भने सिनेमा समिक्षकको लागि नभई दर्शकका लागि बनाइन्छ । त्यसैले एउटा फिल्ममेकरको रुपमा मेरो पहिलो प्राथमिकतामा दर्शक नै पर्नुहुन्छ । जब मैले पाँच वटा फिल्म दर्शकका लागि बनाउँछु, अनि मात्र मैले समिक्षकको लागि सोच्छु । अहिले चाही मैले दर्शकलाई बनाएको हो।
भनेपछि दर्शक र समिक्षकको रोजाईमा फरक हुन्छ ?
– एकदम फरक हुन्छ । त्यसैले अहिले मैले दर्शककै स्वाद अनुसारको फिल्म बनाएको छु । यद्यपी दर्शक र समिक्षकको रोजाई एकै खालको हुँदैहुँदैन भन्ने पनि होइन । हुन्छ तर निकै कठिन संयोग हो । हरेक फिल्मकर्मीको चाहना दुवैलाई मन परोस् भन्ने हुन्छ । मेरो पनि छ।
सिनेमा बन्नु अघि जति कुरा पर्दामा उतार्छु भनेर माइन्ड मेकअप गर्नुभएको थियो । त्यो आज पुरा भएको छ ?
– बजेट, समयलगाएतका समस्याले गर्दा आफूले सोचेको शतप्रतिशत काम पर्दामा उर्तान निकै गाह्रो हुने रहेछ । तर पनि ७० प्रतिशत उतारिएको छ । पोस्ट् प्रोडक्सनको काम सकिएपछि पुरा फिल्म हेर्दा म सन्तुष्ट छु । एउटा लेभलको र गर्व गर्न लायक सिनेमा बनेको छ।
कलाकारहरुको कामबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
– पूर्ण सन्तुष्ट छु । विल्सन विक्रम राई, बाबु बोगटी, श्याम अर्याल, श्वेता भट्टराई सबैले निकै राम्रो काम गर्नुभएको छ । विल्सनले सिनेमालाई नै होल्ड गरेको छ । त्यसैले दर्शकले विल्सनलाई विक्रम गर्न सक्दैनन् । श्यामजीले पनि निकै राम्रो काम गर्नुभएको छ । बाबु बोगटी निर्देशकको भूमिकामा फिट देखिनुभएको छ । श्वेताले पनि आफ्नो तर्फबाट सिन्सियर भएर काम गर्नुभएको छ।
अत्यमा, तपाईको सिनेमा दर्शकले किन हेर्ने ?
– सिनेमाको मुख्य उद्येश्य भनेको मनोरञ्जन नै हो । सामाजिक कामको लागि होइन । भलै कसैलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नु पनि सामाजिक काम नै तर पनि मनोरञ्जन प्रदान गर्नु नै पहिलो काम हो । मेरो सिनेमा हेर्नुपर्ने कारण पनि मनोरञ्जन नै हो । त्यससँगै हामी नेपालीहरुले सिनेमा कल्चरको विकास गर्नुछ । त्यसकारण पनि मेरो सिनेमा हेर्नुपर्छ ।
जनक दीप पराजुलीको निर्देशन तथा उनकै कथामा बनेको मेघा टेली सिरियल ‘डियर जिन्दगी’ घटस्थापनाको दिन बाट...
गायिका मेलिना राईको स्वर रहेको गीतको नयाँ भिडियो सार्बजनिक गरिएको छ। भिडियोमा गीता राइ, इशक राइ र फियोना...